Bisad mucjiso ku noqotay nin safar ku marayay dunida | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Bisad mucjiso ku noqotay nin safar ku marayay dunida
Bisad mucjiso ku noqotay nin safar ku marayay dunida
Markii uu Dean Nicholson, oo horay u ahaa kubadda Rugby-ga u ciyaara Scotland, xirxirtay alaabtii uu ku aadayay safar dunida daafaheeda ah, wuxuu rajeynayay in safarkaas uu ka heli doono khibrad noloshiisa baddasha.
Laakiin ninkan 31-ka jirka ah ma uusan ka warqabin in xayawaan yar oo afar lugood leh uu la noqon doono saaxiib noloshiisana baddali doono abid.
Dean, oo kasoo jeeda magaalada Dunbar, wuxuu dhibsaday nolosha ku saleysan shaqada la aado 9-ka subaxnimo ee laga soo baxo 5-ta galabnimo, wuxuuna go’aansaday inuu baaskiilkiisa kusoo maro guud ahaan caalamka.
Wuxuu ka tagay Scotland, isagoo safarkiisa ugu horreeyay ku aaday Amsterdam. Wuxuu sii maray dalalka Belgium, Giriigga, Switzerland iyo Talyaaniga ka hor inta uusan Doon weyn u raacin waddanka Croatia.
Kaddib wuxuu usii safray Bosnia, halkaasoo uu kula kulmay xayawaanka noqon doona saaxiibka sarafka la wadaagi doona.
Dean wuxuu BBC-da laanteeda Scotland ku yiri: “Waxay ahayd maalin iska caadi ah. Waxaan isku diyaarinayay inaan u gudbo Montenegro, baaskiilkeyga ayaana ku fuulayay meel buur ah.
“Waxaan maqlay bisad iga daba dhawaaqeysa oo i daba ordeysa. Way i bursaneysay ilaa inta aan buurta ka fuulayay. Marka waan istaagay, meel gees ah ayaan dhigtay baaskiilkii, laakiin bisaddii agteyda ayey imaatay mana aysan iga dhaqaaqeynin. Waan soo qabtay waxaan dhex fariisiyay qeybta hore ee baaskiilka, waxaana u kaxeystay magaaladii ugu sokeysay. Waxaan raadiyay inay cid kasoo luntay.
“Laakiin ma jirin cid xannaaneysan jirtay. Islamarkiiba garabkeyga ayey soo fuushay wayna huruday, markaasna waxaan go’aansaday inaan saaxiib ka dhigto. Way ii raacday safarkeyga intii iiga harsaneyd oo dhan.”
Qorshihii hore ee uu ku damacsanaa inuu sida ugu dhakhsiyaha badan ku tago Thailand wuxuu ka baxay daaqadda, sababtoo ah Dean waxaa saameyn isbaddal ah ku keentay bisadda uu ku magacaabay Nala.
Isagoo ka hadlaya Austria ayuu yiri: “Waxay i bartay inaan safarkeuga ka dhigo mid aan deg deg ku soconin, si fiicanna aan nolosha ugu raaxeysto muddo ka dheer sidii aan markii hore damacsanaa. Inay iyada ila saaran tahay baaskiilka waxay igu soo kordhisay inaan tartiib u socdo, oo mararka qaar intaan meel istaagno isla ciyaarno. Marka aan meelaha xeebta ah soo gaarno waxay jeceshahay inay ku oroddo oo ay ku ciyaarto.
Ninkan iyo bisaddiisa waxay ku safreen masaafe dhan 10,000 oo meyl. Dean wuxuu ku khasbanaaday inuu baasaboor u sameeyo bisaddiisa, si ay meel kasta oo dunida ka mid ah ula safarto.
Mararka qaar saaxiibaddiis ayaa go’aamisa xilliga la baxayo.
Dean wuxuu yiri: “Nooma suuragalin inaan waddanka Iiraan safar ku maro, sababtoo ah hoteelladooda ma oggola in bisad lala galo. qorshaheenna hadda waa inaan u safarno dhinaca Ruushka.”
Meel kasta oo ay tagaan, Dean iyo Nala waxaa kusoo xooma dad badan. Dadka deegaannada uu taga jooga waxay aad u xiiseeyaan bisadda yar ee la safreysa ninka baaskiilka wata.
Mararka qaar waxay ku jirtaa dambiil ku xiran baaskiilka, mararka qaarna waxay saaran tahay Dean garabkiisa.
Dadka markii ay arkaan Dean iyo bisaddiisa way istaajiyaan, si ay u arkaan xayawaankan cajiibka ah.
Waxay labadooduba noqdeen mowduuc si weyn loogu falanqeeyo baraha bulshada. Waxay heleen ilaa 800,000 oo ku taxan, maalin kastana waxaa usoo dhaca in badan 1,000 farriimood.
150,000 oo subscribers ah ayey ku leeyihiin Youtube, taasoo u suuragalisay in ay helaan xayeysiimo lacag badan usoo xareeya.
Previous articleRuushka oo ku baaqay marti galinta wadahadallo u dhaxeeya dowladaha Azerbaijan iyo Armenia
Next articleTaliska Maraykanka ee AFRICOM oo ku baaqay in la kordhiyo dagaalka shabaab
Khayre announces candidacy for the presidency
Al Shabaab claims to have killed an army officer in Mogadishu
Somalia: Heavy artillery shelling in Mogadishu
Wararkii ugu Danbeeyey Shir dhimasha Badan keenay oo ka dhacay Isgooyska...
Ciidamada Danab oo Baaritaan ka wado Deeganadii ay Shalay Qabsadeen